Isku aadka Semi finalka Copa del rey oo la sameyeey.
Home Horyaalka Spain Isku aadka Semi finalka Copa del rey oo la sameyeey.
Isku aadka Semi-finalka Copa del Rey ayaa la soo saaray iyadoo labo ka mid ah afarta koox ee ugu sareysa Spain ay ku kulmayaan wareegaan.
Kooxda Sevilla ayaa ku beegmatay Barcelona, halka kooxda Athletic Club ay ku aaday kooxda Levante Lugta hore ee kulanka Sevilla vs Barcelona ayaa ka dhici doona Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan ka hor inta aan la aadin garoonka Camp Nou.
Ciyaarta kale, Athletic ayaa Levante ku marti qaadi doonta San Mames lugta hore ka hor inta aysan u safrin Estadi Ciutat de Valencia.
Taariikhaha semi-finalka waa 10ka Febraayo lugta hore iyo Maarso 3 lugta labaad. Ciyaarta finalka ee 2021 ayaa loo qorsheeyay 17ka Abriil ineey ka dhacdo Estadio de La Cartuja ee Seville.
Previous articleWax ka ogoow saxiixyadii ugu xumaa ee Jose Mourinho.
Next articleCristiano Ronaldo wuu ciyaari karaa ilaa uu ka gaaro 40 sano waa kuma shaqsiga sidaas yiri.